ASHAMPOO UNINSTALLER အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
အကောင်းဆုံးကို performance ကိုကွန်ပျူတာသေချာစေရန်, စနစ်နောက်ဆုံးမှာဘရိတ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်အရာတခုအပိုအမှိုက်သရိုက်, ပျောက်ဆုံးရမည်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အပျက်အစီးများ၏အသွင်အပြင်သို့သော် Ashampoo Uninstaller ပရိုဂရမ်ကိုသုံးပြီးဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်ရလွယ်ကူသောဖြစ်နိုင်, ရှောင်ကြဉ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
Ashampoo Uninstaller သူတို့နောက်ကွယ်ကစွန့်ခွာသူအပေါင်းတို့ကိုသဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းနှင့်အတူဆော့ဖျဝဲကိုဖယ်ရှားကာ utility ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကွန်ပျူတာ၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိ, သင်ထိရောက်စွာစနစ်ကနေအားလုံးအပျက်အစီးများရှင်းလင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုပရိုဂရမ်နှစ်ခုစလုံးက Hard disk ကိုနှင့် registry ကိုဒေတာအောင်, ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထား။ Ashampoo Uninstaller သငျသညျအပြည့်အဝသူတို့ကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးတစ်ခုတည်းယာယီဖိုင်ထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲအစီအစဉ်များကိုဖျက်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
system ကိုသန့်ရှင်းရေးအတှကျအပိုဆောင်း tools များ
built-in tools တွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားပစ်ခေတ်မမီတော့လင့်များနှင့်အဆောက်အဦးများ, drives တွေကို defragment, ထို browser များအတွက်စုဆောင်းသည့် cache ကို, ကိုရှင်းလင်းဖို့မလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်များ၏သင့် hard drive ကိုဆေးကြောသန့်စင်ပါလိမ့်မယ်။
အပိုဆောင်း tools များ၏အကူအညီဖြင့်သင်တို့ကိုဝန်ဆောင်မှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း, မလိုအပ်သော, အမြင်ကို disable နှင့်ကို Windows startup list ထဲမှာအစီအစဉ်များ၏စာရင်းကိုတည်းဖြတ်ဖန်တီး, ဖျက်ခြင်းနှင့်စနစ်အချက်များနှင့်ပိုပြီး restore ကိုသုံးနိုင်သည်။
Ashampoo Uninstaller ၏တစ်ဦးကသီးခြားအပိုင်းပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို recover အဖြစ်ကျိုး shortcuts တွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားပစ်ရန်, သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထပ်ဖိုင်တွေရှာတွေ့ခြင်း, Recycle Bin ကနေဖိုင်တွေကိုရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်။
အထူး function ကို Ashampoo Uninstaller ကိုသက်ဝင်ခြင်းအားဖြင့်, ထို utility ကိုအားဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲကို install အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရယူ, ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများ၏ဖန်တီးမှုခြေရာခံ, သစ်အစီအစဉ်များကို၏ installation စောင့်ကြည့်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ကိုရန်လွယ်ကူ access များအတွက်သီးခြားလျှောက်လွှာရေကူးကန်ကိုဖန်တီးပါ။
Ashampoo Uninstaller ၏အားသာချက်များ:
1. ရုရှားဘာသာစကားများအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူခေတ်မီ interface ကို;
2. installation ပရိုဂရမ်၏ပြီးပြည့်စုံသောဖယ်ရှားရေး;
3. built-in tools တွေကိုကွန်ပျူတာကနေအပျက်အစီးများကိုဖယ်ရှားသည်။
အားနည်းချက်များ Ashampoo Uninstaller:
1. အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုစမ်းသပ် 40 ရက်ကြာကာလတစ်အခပေးထုတ်ကုန်၏,
2. ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူရဲ့ site ကိုမှ, စမ်းသပ်ကာလဝင်ရောက်ဖို့သေးငယ်တဲ့မှတ်ပုံတင်သွားလိုအပ်ပါသည်။
Ashampoo Uninstaller အထူး tool များ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ software နှင့်စနစ်အားစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်စုံဖယ်ရှားရေးများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဤအစီအစဉ်နှင့်အတူသင်အမြဲသင်၏ကွန်ပျူတာအပျက်အစီး၏စုဆောင်းခြင်းတားဆီးသဖြင့်စင်ကြယ်သောထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
Ashampoo Uninstaller ၏စမ်းသပ်မှုဗားရှင်း Download
အကြွင်းမဲ့အာဏာ Uninstaller IObit Uninstaller Revo Uninstaller အဆင့်မြင့် Uninstaller Pro ကို
Ashampoo Uninstaller - လုံးဝအစီအစဉ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကို performance ကိုမြှင့်တင်ရန် tools တွေကိုတစ်အသုံးဝင်သောအစုံ။
အမျိုးအစား: Windows အတွက် Uninstall
ကုန်ကျစရိတ်: $ 35
Size: 18 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: Программа для удаления программ Ashampoo UnInstaller 2017 (အောက်တိုဘာလ 2019).